Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Mandao mangina ny masoivoho amerikanina ny Charge de'Affaires amerikana any Tanzania
Niala am-pahatoniana ny andraikiny diplaomatika ny tompon'andraikitra ao amin'ny masoivohon'i Etazonia ao Tanzania taorian'ny namoahan'ny masoivoho torohevitra momba ny dia momba ny fizotran'ny COVID-19 tany Tanzania.
Tsy napetraka avy hatrany raha ny diplaomaty zokiolona amerikana, Dr. Inmi Patterson dia namarana ny fitsidihany andraikitra tany Tanzania andro vitsy lasa izay, saingy, fantatra tsara fa niantso azy ny Minisiteran'ny raharaham-bahiny Tanzanianina indray mandeha noho ny mpanolo-tsaina ny masoivoho amerikana tany Etazonia. Dar es Salaam dia namoaka ny areti-mifindra COVID-19.
Nandritra ny telo taona nitetezany tany Tanzania dia nanintona fanampiana ara-bola i Dr. Patterson hanohanana ny sehatry ny fahasalamana eto amin'ity firenena ity.
Nanolotra dolara amerikana 2.4 tapitrisa dolara amerikana ho an'ny sehatry ny fahasalaman'i Tanzania i Etazonia tamin'ny volana lasa teo mba hanamafisana ny fahafaha-manao diagnostika safidy sy ny fifandraisana amin'ny risika mandritra ny areti-mandringana COVID-19.
1.9 tapitrisa dolara amerikana iray hafa natokana ho an'ny ezaka fanalefahana COVID-19, ka nitentina 5.3 tapitrisa dolara amerikana.
Talohan'ny niaingany ho any Washington, dia nilaza i Dr. Patterson fa mandritra ny fampielezan-kevitra manerantany hiadiana amin'ny fihanaky ny valanaretina Coronavirus manerana an'izao tontolo izao dia miasa i Etazonia Etazonia miaraka amin'ireo namany sy mpiara-miombon'antoka aminy hiantohana ny filaminana ara-pahasalamana manerantany.
“Isan'andro dia tonga ny fanampiana ara-teknika sy ara-pitaovana vaovao any amin'ny hopitaly sy laboratoara manerantany. Ireo ezaka ireo, kosa, miorina amin'ny fototra efa an-taonany maro amin'ny fahaizana amerikana, fahalalahan-tanana ary drafitra izay tsy mitovy amin'ny tantara ", hoy i Inmi.
“Etazonia dia manome fanampiana amin'ny fampandrosoana mba hanamafisana ny fifamatorana amin'ireo firenena manerantany satria mino izahay fa izany no zavatra tsara tokony hatao. Ataontsika ihany koa izany satria tsy manaja ny fetra nasionaly ny pandemika. Raha afaka manampy ny firenena misy valanaretina isika, dia hamonjy aina any ivelany sy any an-trano any Etazonia isika ”, hoy izy nanamarika.
Manoloana ny fihanaky ny COVID-19, ny fanoloran-tenan'i Etazonia amin'ny fahasalamana Afrikana sy manerantany dia mbola tsy ary tsy hiala. Hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19, ny governemanta amerikana dia nanolotra vola mitentina 500 tapitrisa dolara manerantany ho fanampiana hatramin'izao.
Amerika izao dia mamatsy vola ny 40 isan-jaton'ny fandaharan'asa fanampiana ara-pahasalamana manerantany, manampy $ 140 miliara amin'ny fampiasam-bola ara-pahasalamana nandritra ireo 20 taona lasa izay in-dimy.
"Nanomboka tamin'ny taona 2009, ny mpandoa hetra amerikana dia nanohana tamim-pahalalahan-tanana mihoatra ny $ 100 lavitrisa fanampiana ara-pahasalamana ary efa ho $ 70 miliara ho an'ny fanampiana maha-olona eran-tany", hoy i Inmi nanampy.
"Ity vola ity dia namonjy ain'olona, ​​voaaro ireo olona mora tohina indrindra amin'ny aretina, nanangana toeram-pitsaboana, anisan'izany ireo eo amin'ny laharana voalohany amin'ny valinteny COVID-19, ary nampiroborobo ny fitoniana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena", hoy i Inmi.
“Tsy misy firenena afaka miady amin'ny COVID-19 irery. Rehefa manana fotoana sy fotoana imbetsaka isika, Etazonia dia hanampy ny hafa mandritra ny fotoana ilain'izy ireo fatratra. Hanohy hanampy ny firenena izahay amin'ny fananganana rafitra fikarakarana ara-pahasalamana maharitra izay afaka misoroka, mamantatra, ary mamaly ny areti-mifindra ", hoy izy nanamarika.
"Afaka miaraka hiatrika ny fanamby ara-tantara napetraky ny areti-mandringana COVID-19 isika, isan'andro manerantany", hoy ny famaranana ny Charge d'Affaires ambasadin'i Etazonia ao Tanzania.
Ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump dia nanendry an'i Dr. Don J. Wright avy any Virginia ho iraka vaovao any Tanzania mandritra ny telo taona amin'ny Masoivoho amerikana ao an-drenivohitr'i Tanzania any Dar es Salaam izay mihazakazaka tsy misy masoivoho voatendry.
Rehefa voamarina i Dr. Wright dia handimby an'i Mark Bradley Childress izay masoivohon'i Etazonia tany Tanzania ny 22 Mey 2014 ka hatramin'ny 25 Oktobra 2016. Hatramin'izao, ny masoivoho amerikana dia teo ambany fiandraiketan'i Charge d'Affaires, Dr. Inmi Patterson alohan'ny hiaingany.
Etazonia no mpamatsy vola lehibe indrindra an'i Tanzania amin'ny tetik'asa ara-pahasalamana mikendry ny famongorana ny tazomoka, ny tioberkilaozy, ary ny fisorohana ny VIH / SIDA, fandaharam-pianarana azo antoka ho reny, ary fandaharam-pianarana momba ny fahasalamana.
Miaraka amin'ny fameperana teti-bola amin'ny serivisy ara-pahasalamana, i Tanzania dia miankina amin'ny fanohanan'ny mpamatsy vola, ny ankamaroan'ny fanjakana Etazonia, Angletera, Alemana ary Skandinavianina mba hamatsy ara-bola ny tetik'asa ara-pahasalamana.
Ny fiarovana ny bibidia no faritra hafa nanoloran'ny governemanta amerikana azy ireo hanohana an'i Tanzania tato anatin'ny taona vitsivitsy. Amerika dia teo amin'ny laharana voalohany hanampy an'i Tanzania amin'ny fampielezan-kevitra manohitra ny fanjonoana mikendry ny famonjena ireo elefanta afrikana sy ireo karazana tandindomin-doza hafa tsy ho lany tamingana amin'ny fihazana.
Ny governemanta amerikana dia nanohana ny tanzaniana sy ny firenena afrikanina hafa hiady amin'ny fampihorohoroana iraisam-pirenena sy ny piraty any amin'ny ranomasimbe indianina.
Taorian'ny nandraisany ny toerany vaovao tao Dar es Salaam, ny masoivoho amerikana vaovao dia antenaina hitarika diplomasiana ara-toekarena eo amin'i Tanzania sy Etazonia. Ny fizahantany no sehatra ara-toekarena mitarika izay tadiavin'i Tanzania fiaraha-miasa amerikana.
Etazonia no faharoa amin'ireo mpizahatany kilasy mitsidika an'i Tanzania isan-taona. Amerikanina maherin'ny 50,000 no mitsidika an'i Tanzania isan-taona, ka mahatonga an'i Etazonia ho mpizahatany kilasy ambony mitsidika ity toerana safari afrikanina ity.